2 Goobaha Sawirka Sawirka Sawirka Sare ee Furan | Abuurista khadka tooska ah
2 shabakado sawir furan oo tayo sare leh
Bogagga shabakadaha sawir qaadista ee furan waxaa jira tiro wanaagsan oo iyaga ka mid ah iyo dhowr galitaan oo ka socda Creativos Online ayaan u soo ururiyey si ay si fudud ugu galaan. Tan iyo markii ay ahayd gelitaankii ugu horreeyay oo leh 14 degel, kuwa kale 10 baloog oo leh sawirro tayo sare leh iyo markii ugu dambeysay la bilaabay 20 degel kuwaas oo mas'uul ka ah inay keenaan sawirro furan oo furan, maanta waa waqtigii laba kale oo hubaal ah inaad ku dari doontid kuwa ugu cadcad maanta.
Labadan degel waa FancyCrave iyo Barn Images. Laba goobood oo tayo sare leh oo kuu oggolaanaya inaad dhammaan sawiradaada kala soo baxdo bilaash ama adeegsi shaqsiyeed ama ganacsi. Labaduba waxay la yimaadaan dhex-dhexaad wacan oo ku habboon isku dhacyadan oo leh noocyo kala duwan iyo sawirro ballaaran oo kala duwan si aad uga heli karto midka saxda ah shaqadaada.
1 Sawirada Barn
2 Jaceylka macaan
Waxay bixisaa ururinta aad u xiiso badan oo ah sawirro qaraar sare oo gebi ahaanba bilaash ah. Dhammaan sawirada waxaa ruqsad ka haysta Creative Commons Zero (CC0), oo macnaheedu yahay in loo isticmaali karo, wax laga beddeli karo laguna qaybin karo bilaash xitaa ujeeddooyin ganacsi iyada oo aan loo baahnayn in fasax la weydiisto. In kasta oo aan loo baahnayn in loo nisbeeyo isha sawirradu ka yimaadeen, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa in si uun loogu soo celiyo nimcada, in kasta oo waxa la sheegay aysan ahayn wax khasab ah.
Barn Sawirada waxaad ka heli kartaa sawirro leh mawduuc koobaya xayawaan, magaalo, muuqaal dabiici ah, dabiici ah, dad, walxo iyo safar. Fursad weyn oo loogu dhowaado sawirro tayo wanaagsan leh.
Fancy Crave ma lahan sawirro badan oo ururin ah, laakiin in ka badan 100 sawir oo ay ku hayso kaydka iyo waqtiga yar ee ay ahayd baloog, waa mid kale oo ka mid ah websaydhadaas oo ay tahay inaan calaamadinno si aan u helno waxyaabo tayo sare leh.
Leh a mawduucyo kaladuwan oo wanaagsan iyo sida Barn Images oo u oggolaanaya helitaanka dhammaan sawirrada lacag la'aan ah xitaa isticmaalka ganacsiga. Hadaad rabto sidoo kale waad sheegi kartaa laakiin qasab maaha. Websaydh kale oo tayo gaar ah leh oo sawirro ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sawirro » 2 shabakado sawir furan oo tayo sare leh
10 ciyaarood oo khadka tooska ah loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafyada iyo maskax maskaxeed
Xirmo Bilaash ah + 20 Feekooyinka Ubax